Umtsalane welizwe. Inqabileyo & Ezolileyo. Akutshaywa, okanye imbiza - I-Airbnb
Umtsalane welizwe. Inqabileyo & Ezolileyo. Akutshaywa, okanye imbiza
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguStacey
Sinikezela ngegumbi le-rustic kwiLizwe loMoya oNtsha. Igumbi labucala kunye negumbi lokuhlambela labucala. Wamkelekile ukuba usebenzise ikhitshi, kwaye ube nokufikelela kweyakho ifriji encinci. Iindawo ezininzi ezivulekileyo ngaphandle, kwaye ngamanye amaxesha imfuyo ukubona. Sinikezela ngewotshi ye-alarm kwigumbi, ukukhanya ebusuku, i-mattress pad eshushu, kunye nomatshini wokulala wengxolo emhlophe. Kukho ifeni yesilingi, kunye nedesika encinci kunye nesitulo seofisi kwigumbi. Nceda ungatshaywa naphi na kwipropati! Akukho kutya egumbini!
Igumbi leRustic elicocekileyo. Sibonelela ngokukhanya ebusuku. Kukho i-Matras pad eshushu. Sinikezela ngomatshini wesandi sesandi esimhlophe. Sine-32 "i-smart TV kwigumbi eline-eriyali. Ifumana iziteshi ezi-4-5, kodwa ungangena kwi-Hulu, netflix / njl kwaye ubukele ngokunjalo. Wamkelekile ukuba udlale kwaye uqokelele "emqolombeni womntu" / Igumbi lokudlala Wamkelekile ukuba usebenzise iKitchen Akukho kutya kwigumbi lokulala, nceda utye kwitafile yegumbi lokutyela.
4.97 · Izimvo eziyi-74
Indawo entsha evulekileyo yokuhlala. Ukuhamba nje kwemizuzu eli-10 ukuya edolophini ukuba ufuna ukubamba indawo yokutyela okanye imuvi. Ilizwe elizolileyo lihlala ngokugqibeleleyo! Imayile enye nje ukusuka phakathi kwe76
I am a nurse, currently working as a travel nurse. My husband manages a rental business we own. We stay very busy, and love to travel!
Fowuna okanye uthumele umyalezo ku-970-380-3414. Singakwazi ukusebenzisana kakhulu okanye kancinci njengoko ungathanda. Umyeni wam uyakuthanda ukudubula echibini-khawubuze nje!